I-Semalt: Kuyini Ukukhishwa Okuqukethwe? Izinhlobo Ezi-4 Ze-Web Content Ekhishwa Ngetheni
Ukuhlelwa kokuqukethwe kungukuphindaphinda kokuqukethwe kwewebhu ngesandla noma ngenani amathuluzi. Abaningi be-webmaster nababhlogi be-copyright bavikela okuqukethwe kwabo ngaphansi kwemithetho ye-copyright, futhi ukuthumela imininingwane eyebiwe njengento yokuqala kuyibugebengu obubi!
Ngeshwa, okuqukethwe kwewebhu kukhishwa kakhulu ngezinhloso ezingacabangi futhi ezingekho emthethweni njengezobuqhawe bezimboni, ukuthungatha, nokweba kwedatha. Noma kunjalo, izinhloso ezisemthethweni nokuqinisekiswa kokuqukethwe kokuqukethwe kukhona ukungena kwedatha, ukuphathwa kokuqukethwe, ukudluliswa kwedatha, ukuhlakanipha kokuncintisana, ukuphathwa kwedumela noma ukuhlaziywa kwebhizinisi.
Izinhlobo ezine ezihlukene eziqukethwe kwi-intanethi:
Abanye abakwa-webmasters nababhlogi bebasebenzisa okuqukethwe kumawebhusayithi ahloniphekile namabhulogi, becabanga ukuthi ukwandisa umthamo wamakhasi kumasayithi abo kuhle ekusesheni injini rankings. Futhi eqinisweni, noma yikuphi okuqukethwe kunokwemvelo, kodwa izinhlobo ezine eziyinhloko zokwakheka okukhulunywe ngazo zingezansi.
1. Abashicileli bezinombolo kanye nezinkomba:
Abamemezeli boDidiyeli kanye namarekhodi e-inthanethi avame ukubhekiswe ngabalimi nabathuthukisi, abahlose ukukhipha okuqukethwe okuvela kulezi zingxenyekazi zamabhulogi abo angasese. Yell. com is isibonelo esinjalo. Lo mhlinzeki wezinsizakalo ze-intanethi kanye nomhlahlandlela we-intanethi bathole impumelelo enkulu ezinyangeni zamuva. Okuqukethwe okuningi kule sayithi kukhishwe, futhi abagaxekile bahlale befuna izindlela zokweba amakhasi awo amaningi. Ngokufanayo, i-Manta yiwebhusayithi edume lapho kunezigidi ezingaphezu kwezigidi ezingu-20 ezizibhalisile ngokwazo ngezinhloso zokuthengisa. Ngeshwa, okuningi kokuqukethwe kwalo kukhishwe, futhi isibalo esikhulu sebhodi sisetshenziselwa le njongo.
Eminyakeni embalwa eyedlule, ama-ejensi yendawo yokuhlala ahlaselwa yi-content scraper, futhi ukubuyisela kubalima ngaphezu kwezigidi ezingu-10 zamaRandi.
Kubonakala sengathi okuqukethwe kuzo zonke izingosi zokuhamba kukhishwe. Lezi zinkampani azihlinzeki nje kuphela ngolwazi mayelana nezindawo ezihamba phambili emhlabeni kodwa futhi zinikezela ngamasevisi okuhamba kumakhasimende abo. Izingosi zokuhamba zibhekene nokulula kokuqukethwe kwe-scrapers. Amanye ama-ejensi ahamba phambili e-intanethi asengozini yi-Kayak, i-TripAdvisor, i-Priceline, i-Trivago, i-Expedia, ne-Hipmunk. Bakhe amabhizinisi angama-billion-dollar meta-search, futhi okuqukethwe kwabo kuvame ukukhishwa futhi kusetshenziswe kumawebhusayithi amancane namabhulogi.
4. Ukuhwebelana nge-E-commerce:
Kuyiqiniso ukuthi okuqukethwe kwe-e-commerce indawo ayikwazi ukukhishwa kalula, kodwa amawebhusayithi afana ne-eBay ne-Amazon asabhekwa ngezincazelo zamanani nokukhiqiza Source .